बहुलाको बीउ - परिहास - नेपाल
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापाको कार्यकर्ता प्रशिक्षणको पहिलो पाहुना रहेछन्, प्रदीप गिरि । कम्युनिस्टलाई माक्र्सवादी शिक्षा पढाउने गिरिको अभियान बनेपासम्म पुगेको छ । कम्युनिस्टलाई प्रशिक्षण दिन किन कांग्रेस नेता ? कुरो बुझ्दा पत्तो लाग्यो कि धेरै पढ्ने मान्छे बहुलाउँछन् भन्ने कमरेड वाणीपछि पार्टीमा बहुला विद्वान्हरु मासिए । अनि, गिरिको शरण नपरेर के गरुन् त ?
प्रकाशित: श्रावण १२, २०७५